Uhulumeni usebenzise imali engu-R42m ukuthenga izimoto zikanokusho - DA | News24
Uhulumeni usebenzise imali engu-R42m ukuthenga izimoto zikanokusho - DA
Cape Town – Imibuzo efakwe ePhalamende iveze ukuthi uhulumeni usebenzise imali engu-R41,960,075 ukuthengela oNgqongqoshe izimoto zikanokusho kanye namaphini abo phakathi kuka-2014 no-2017, kusho iDemocratic Alliance ngeSonto.
“ONgqongqoshe be-ANC bayaqhubeka nokusebenzisa ezimali ezishisiwe zomphakathi ukuthenga izimoto zikanokusho ekubeni izigidi zabantu baseNingizimu Afrika zingenayo nemali yokuthenga ukudla,” kusho okhulumela i-DA uDesiree van der Walt.
UNgqongqoshe weziMali uPravin Gordhan kusukela ngo-2013 unxusa ukuba uhulumeni ukuba azame ukonga izimali. Kodwa kubukeka sengathi ozakwabo abafuni ukulalela, usho kanje.
OLUNYE UDABA: Abakwa-Sassa sebekulungele ukuholela abantu
UMnyango wezokuThuthukiswa kwezindawo zasemakhaya iwona omoshe kakhulu imali njengoba usebenzise u-R5,505,351 ukuthengela izimoto uNgqongqoshe uGugile Nkwinti namaphini akhe.
“Lena ngabe imali esetshenziselwe ukusiza abalimi abamnyama abasathuthuka abaludinga kakhulu usizo lukahulumeni.”
Eminye imiNyango esebenzise kakhulu imali kubalwa owezokuthutha (R3,453,870), owezobulungiswa (R3,275,138), owamabhizinisi kahulumeni (R2,669,377), owezolimo (2,502,425), kanye nowezokuxhumana (R2,383,769), kusho uVan der Walt.
Uthe i-DA izoqhubeka nokuqapha ukuthengwa kwezimoto zithengelwa izikhulu zikahulumeni.